လူအုပ်ကြားထဲ မြွေနဂါးပုံကြီးထည့်ပြီး Photoshop လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာသမား အဖမ်းခံရ...! - Myanmar Daily Time
HomeNEWSလူအုပ်ကြားထဲ မြွေနဂါးပုံကြီးထည့်ပြီး Photoshop လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာသမား အဖမ်းခံရ…!
လူအုပ်ကြားထဲ မြွေနဂါးပုံကြီးထည့်ပြီး Photoshop လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာသမား အဖမ်းခံရ…!
တရုတ်နိုင်ငံ ချုံကျင်းမြို့နေ အသက်(၅၀) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို မဟုတ်မမှန်သတင်းပြန့်ပွားအောင်လုပ်ဆောင်မှူနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ၄င်းအမျိုးသားဟာ မြွေနဂါးကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ကာ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတင်ရုံနဲ့တင်မပြီးပဲ ဇွန်လ(၁၇) နေ့တုန်းက စီချွမ်ပြည်နယ်ကို လှူပ်ခတ်သွားတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ငလျင်ဟာ ၄င်းမြွေနဂါးကြီးကြောင့်ပါလို့လည်း သူက သတင်းလွှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဆိုပါအမျိုးသားနာမည်ကတော့ ကျန်းလို့ သိရပါတယ်။ ကျန်းဟာ ကျေးလက်တောင်ကုန်းတစ်နေရာက ဓာတ်ပုံထဲကို မြွေတစ်ကောင်ဖြတ်ညှပ်ကပ်ထည့်ပြီး စာရေးသားကာ လိုင်းပေါ်မှာတင်ခဲ့တာပါ။
“ အရှည်(၁၂၀) မီတာ လုံးပတ်(၁.၅) မီတာရှိတဲ့ မြွေနဂါးကြီးတစ်ကောင်က ဒီနေ့နေ့လည်(၂)နာရီမှာ ရေထဲကနေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ချန်ဒူမြူနီစပယ် ကော်မတီက နဂါးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်နေကြတယ်။ လူထောင်ပေါင်းများစွာကလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။
အခုဆိုရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေက အဲ့ဒီနေရာကို ရောက်နေပါတယ်။ မြွေနဂါးကြီးဟာ ငလျင်နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့လည်း ဆိုနေကြတယ်… ”
ကျန်းဟာ ၄င်းပို့စ်ကို လူပေါင်း(၁၃)ယောက်ကို အသက်ဆုံးရှူံးစေခဲ့ပြီး ရီဘင်းမြို့ကို လှူပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ မဂ္ဂနီကျုဒ် (၆.၀) အဆင့်ရှိတဲ့ ငလျင်အပြီးမှာ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းပြုပြင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ အတုကြီးမှန်းသိသာပေမယ့်လည်း တော်တော်များများက ပြန်လည်ရှဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဲအဖွဲ့က ပြည်သူလူထုကို စိတ်တုန်လှူပ်ခြောက်ခြားအောင် မဟုတ်မမှန်သတင်းတုတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီး ကျန်းကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းကတော့ သူ့အနေနဲ့ လူတွေကို ခြောက်ခြားစေဖို့မရည်ရွယ်ပဲ ဟာသအဖြစ်နဲ့သာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
တရုတျနိုငျငံ ခြုံကငျြးမွို့နေ အသကျ(၅၀) နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဈဦးကို မဟုတျမမှနျသတငျးပွနျ့ပှားအောငျလုပျဆောငျမှူနဲ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားကွောငျး သိရပါတယျ။ ၎င်းငျးအမြိုးသားဟာ မွှနေဂါးကွီးတဈကောငျရဲ့ ရုပျပုံကို ပွငျဆငျတညျးဖွတျကာ အှနျလိုငျးပျေါတငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဓာတျပုံတငျရုံနဲ့တငျမပွီးပဲ ဇှနျလ(၁၇) နတေု့နျးက စီခြှမျပွညျနယျကို လှူပျခတျသှားတဲ့ ကွောကျမကျဖှယျငလငျြဟာ ၎င်းငျးမွှနေဂါးကွီးကွောငျ့ပါလို့လညျး သူက သတငျးလှငျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။
အဆိုပါအမြိုးသားနာမညျကတော့ ကနျြးလို့ သိရပါတယျ။ ကနျြးဟာ ကြေးလကျတောငျကုနျးတဈနရောက ဓာတျပုံထဲကို မွှတေဈကောငျဖွတျညှပျကပျထညျ့ပွီး စာရေးသားကာ လိုငျးပျေါမှာတငျခဲ့တာပါ။
“ အရှညျ(၁၂၀) မီတာ လုံးပတျ(၁.၅) မီတာရှိတဲ့ မွှနေဂါးကွီးတဈကောငျက ဒီနနေ့လေ့ညျ(၂)နာရီမှာ ရထေဲကနေ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ ခနျြဒူမွူနီစပယျ ကျောမတီက နဂါးကွီးနဲ့ပတျသကျပွီး စိုးရိမျနကွေတယျ။ လူထောငျပေါငျးမြားစှာကလညျး စိတျဝငျစားနကွေတယျ။
အခုဆိုရငျ နားလညျတတျကြှမျးသူတှကေ အဲ့ဒီနရောကို ရောကျနပေါတယျ။ မွှနေဂါးကွီးဟာ ငလငျြနဲ့ဆကျစပျနတေယျလို့လညျး ဆိုနကွေတယျ… ”
ကနျြးဟာ ၎င်းငျးပို့ဈကို လူပေါငျး(၁၃)ယောကျကို အသကျဆုံးရှူံးစခေဲ့ပွီး ရီဘငျးမွို့ကို လှူပျခတျခဲ့တဲ့ မဂ်ဂနီကြုဒျ (၆.ဝ) အဆငျ့ရှိတဲ့ ငလငျြအပွီးမှာ အှနျလိုငျးပျေါတငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ကနျြးပွုပွငျထားတဲ့ ဓာတျပုံဟာ အတုကွီးမှနျးသိသာပမေယျ့လညျး တျောတျောမြားမြားက ပွနျလညျရှဲခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရဲအဖှဲ့က ပွညျသူလူထုကို စိတျတုနျလှူပျခွောကျခွားအောငျ မဟုတျမမှနျသတငျးတုတှပွေုလုပျတယျဆိုပွီး ကနျြးကို ထိနျးသိမျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြးကတော့ သူ့အနနေဲ့ လူတှကေို ခွောကျခွားစဖေို့မရညျရှယျပဲ ဟာသအဖွဈနဲ့သာ ပွုလုပျခဲ့တာဖွဈကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် အသက် ၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ၁ ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ…!
This Year : 164457
Total Users : 190342
Total views : 574706